ZANU-PF Archives - BizNews.com
Zimbabwe’s fuel pipeline allegedly ‘captured’ by Trafigura
14th April 2019 11th April 2019
A Swiss-based global commodities trader is facing accusations that it used a Zanu-PF-linked local facilitator and partner to ‘capture’ exclusive fuel supply rights to Zimbabwe.
Zim returns to national currency amid confusion and suspicion – FT
4th March 2019 25th February 2019
A decision by Zimbabwe to effectively create a new national currency for the first time since adopting the US dollar in 2009 would fail without associated fiscal reforms to restore trust, says a former finance minister.
Veteran journalist and long-time Zimbabwe observer, Barry Wood, reports on the case for and against the global community bailing out President Mnangagwa and his long-ruling Zanu PF party.
The editorial board of the Financial Times has published a scathing overview of Zimbabwe, predicting that it is heading for a Venezuela-style meltdown.
Is Mnangagwa playing the good cop in Zimbabwe crackdown?
13th September 2018 30th August 2018
It seems Zimbabwe’s now de facto democratically-elected President Emmerson Mnangagwa’s biggest problem is just how to restore international confidence by making some bold moves that will ignite vague hope that the country’s economy can be turned around.
This is a cogent, rational argument by DA leader, Mmusi Maimane in his interpretation of the Zimbabwe elections and the parallels he draws with South Africa.
23rd August 2018 8th August 2018
Former Zimbabwean Finance Minister Tendai Biti, a leader of the country’s main opposition alliance, was arrested in neighbouring Zambia where he plans to seek asylum, his lawyer said.
The story of Zimbabwe as seen in Cathy Buckle’s home town, the morning after the declaration of Mr Mnangagwa as the winner of the Presidential election, can be told in a few, brief sentences.